JiangXi Aili New Material Technology Co., Ltd-Company Okwu Mmalite
1. Okwu mmalite ụlọ ọrụ 2. Ngwaahịa & Ngwongwo Mechanical 3.Products & ...
Egwuregwu Tokyo 2020
-Ndị egwuregwu niile, bịa na 2020 na 2021 ga -abụ afọ abụọ pụrụ iche, na Febụwarị 2020 ọrịa ahụ malitere na China, mgbe ahụ, ọrịa zuru ụwa ọnụ ji nwayọọ nwayọọ malite ịgbasa. Ruo taa, ekwenyela ihe karịrị nde 200 n'ụwa niile, na ihe karịrị nde mmadụ 4 nwere ...
Ọrụ ụlọ otu na -apụ, ndụ abụghị naanị ọrụ, kamakwa abụ na ịdị anya. A na -enwe otu ahụ na mkpụrụ obi mgbe niile n'ụzọ. Iji kwụghachi ọrụ dị mma na ịrụsi ọrụ ike nke ndị ọrụ Aili na iwusi ịdị n'otu nke ụlọ ọrụ ahụ ike, Aili haziri nke a nke ọma ...
Ọnụ na ifufe na mmiri ozuzo, anyị nọkọtara ọnụ
Julaị 20 bụ ụbọchị pụrụ iche na ụbọchị ọjọọ, pụrụ iche maka Henan Zhengzhou City, yana ndị China anyị niile. Site n'ụbọchị taa, Henan Zhengzhou City zutere oke mmiri ozuzo nke a na -ahụbeghị kemgbe ọtụtụ afọ, nke mere ka ụfọdụ mmadụ nwụọ na ọtụtụ ndị obodo China efunahụla ụlọ ha. Enwere ...
Ezi ekeresimesi 2020
site na nchịkwa na 20-12-25
Kedu ka ị chọrọ isi ekeresimesi ọma? Ka Chineke jiri ngọzi na -akparaghị ókè zụọ ndụ gị n'ụbọchị a. Atụrụ m anya na oge mmemme a ga -ewetara gị na ezinụlọ gị ọchioma na ezi ahụ ike. Ekeresimesi ọma na afọ ọhụrụ! ...
Taa ， Aili nwere ngwụcha zuru oke nke ihe ngosi 2020 bauma CHINA ， Kedu ihe ị nwetara?
Taa, Bauma CHINA nke iri rutere na Shanghai New International Expo Center. Ihe ngosi ụbọchị anọ agwụla. Ihe ngosi Bauma CHINA Shanghai bụ ọkachamara, zuru ụwa ọnụ na ọkwa dị elu na igwe nrụpụta iji gosipụta amamihe China na ịgbanye ike na ntụkwasị obi n'ime ...
Ihe ngosi 2020 Bauma Shanghai
site na nchịkwa na 20-11-20
Nabata ka ị gaa ihe ngosi Aili Shanghai Bauma na 24th-27th Novermber, Aili Booth bụ W2.148. Nkedo Aili nwere ahụmịhe afọ 40, ebe omumu ihe dị square mita 160000. Nke a bụ ka anyị si edobe ịdị mma dị mma na ntụkwasị obi maka ndị ahịa ụwa niile. Anyị bụ ọkachamara na ịwụ, ezé & ada ...
Otu esi ejikwa otu ndị na -ere ahịa: ndụmọdụ ọkachamara iri na abụọ maka ịga nke ọma
site na nchịkwa na 20-11-14
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta ka esi ejikwa otu ndị na -ere ahịa, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị. Ị na -achọ inweta nghọta sitere na ndị ọkachamara kacha elu bụ ndị bịaranụ (ma mee ya) na mbụ. Ijikwa otu ndị na -ere ahịa bụ ihe ịma aka n'ezie, mana ruo mgbe ijisiri ma ọ bụ nọrọ n'òtù ndị na -ere ahịa na -ekpughe ...
Kedu ihe ị maara gbasara nhọpụta na ndozi ezé na -egwu olulu.
Ezé ịwụ nke onye na -egwupụta ihe bụ otu n'ime akụkụ mebiri emebi nke onye na -egwupụta ihe ， Yiri ezé mmadụ, ọ nwere ezé na ihe nkwụnye ọkụ, nke a na -ejikọ ya na ntụtụ. N'ihi ịwụ na ịwụ ịwụ, ezé bụ akụkụ na -adịghị mma, ọ bụrụhaala na -edochi ezé. 1 ...
Ọdịiche dị n'etiti ibe ya na nkedo
site na nchịkwa na 20-11-02
Jiangxi Aili New Material Technology Co. LTD Ọdịiche dị n'etiti ịkwa iko na nkedo Nhazi nke ime ibe ya bụ kọmpat na ike dị elu. Eji ya maka ọnọdụ ịrụ ọrụ siri ike karị. Ọdịdị nke ime nkedo adịghị mma na ike dị ala, yabụ enwere ike iji ya n'okpuru izugbe ...
Okwu mmalite nke ezé ịwụ na -egwupụta ihe
site na nchịkwa na 20-10-20
Okwu mmalite nke ndị na -egwupụta ihe na -agba ihe ịwụ. Ha yiri ezé mmadụ. Ha na -agbakọta ezé ịwụ nke oche ezé na ọnụ ọnụ ezé, nke a na -ejikọ site na pin pin. Ebe ọ bụ na wor ...
Aili rụpụta mmelite ezé adịgboroja
site na nchịkwa na 20-08-28
Jiangxi Aili bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ọkachamara na R&D, n'ichepụta na ire nkenke nkedo na ịkwa akwa akụkụ ahụ maka igwe nrụpụta ihe. Aili rụpụta tumadi na -emepụta ripper, ịwụ ezé, ịwụ nkwụnye, ịwụ n'akụkụ cutter, mbepụ, ọgwụgwụ bit, pin & retainer, kpọchie & ...